सरकारका दुई वर्षः विकास र समृद्धिका सपनाहरु यथार्थमा रुपान्तरित हुँदै ! - Everest Dainik - News from Nepal
सरकारका दुई वर्षः विकास र समृद्धिका सपनाहरु यथार्थमा रुपान्तरित हुँदै !
काठमाडौंः सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको समयमा पनि नेपालमा विकास र समृद्धिका सपनाहरु देखाइएका थिए । ती सपनाले कहिले साकाररुप पाउने भन्ने कुनै सुनिश्चितता थिएन ।
निरन्तर हत्या, हिंसा र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको खेलले विकास निर्माणबारे नेताहरुका भाषण व्यवहारमा रुपान्तरित हुन सकेका थिएनन् भने विश्व परिवेशमा नेपालको परिचय अविकसित र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका रुपमा हुन थालेको थियो ।
जनआन्दोलन र जनयुद्धको जगमा जननिर्वा्चित संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक स्थिरताको चरण आरम्भ भएको हो । पछिल्ला समयमा मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनका परिसूचकहरुमा क्रमशः सुधारका साथै जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी विकास निर्माणका क्रमको थालनी भएको छ ।
‘सरकारले दुई वर्षको अवधिमा के के राम्रो काम गर्‍यो, जनता सुन्न आतुर छन्’,सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारले नराम्रो काम एउटा पनि गरेको छैन । सबै राम्रो गरेको छ । नराम्रो भयो भनेर देख्ने आँखा र लेख्ने हातहरुमा प्रश्न उब्जन सक्छ । विधिको शासन बलियो बनाउनेदेखि आकाश पाताल सबैतिर विकासमा हात हालेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी यसबीचका उपलब्धिबारे अवगत गराउने उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अहिलेलाई यति भनौँ मूर्छित सपनाहरु जीवनको यथार्थमा रुपान्तरित हुँने छन् । जनतालाई जे जे गर्छु भनेका थियौँ, त्यो गरेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका विचारमा सरकारले दुई वर्षमा विकासको आधार तय गरेको थियो भने अहिले विकासको गति पक्रेको छ । वामगठबन्धनले २०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि सोही वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
सरकारले यो दुई वर्षमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी ल्याएको छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०.४ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले सङ्घीय संसद् भवन सिंहदरबारभित्र बनाउन थालेको छ । भवन अभावका कारणले वीरेन्द्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद् भवन भाडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आफैँ संसद् भवन बनाउन थालेको हो । उक्त भवन तीन वर्षमा सक्ने गरी निर्माण प्रारम्भ सरकारले गरेको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि विस्तार अगाडि बढाएको छ । सरकारले अहिले १२ वटा मुलुकसँग थप सम्बन्ध विकास गरेर १६८ देशसंग सम्बन्ध बढाएको छ । सरकारले थप १५ मुलुकसँग दुईपक्षीय परामर्शका संयन्त्र स्थापना गरेको छ । सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिका कारणले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को अभिरुचि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं दुई दशकपछि बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्नुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १७ वर्षपछि अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण गरेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटै कार्यकालमा चार पटक नेपाल भ्रमण भएको छ । रासस
ट्याग्स: केपी शर्मा ओली, नेकपा सरकार